မေမေရဲ့ Hand Make Wine | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မေမေရဲ့ Hand Make Wine
Posted by Yin Nyine Nway on Jun 18, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 24 comments
အနော့် မဲ့မဲ့က ၀ိုင်လုပ်တာ ကျွမ်းတယ်ဗျ
ထွက်သမျှ အသီး သူဝိုင်မလုပ်ဖူးတာမချိဘူး
နံနတ်၊ သစ်တော်၊ စပျစ်၊ လိမ္မော်၊ စတာတွေအပြင်
ချဉ်စော်ခါးသီး ဇောင်းယားသီးတွေကိုလည်း ၀ိုင်လုပ်တယ်
၀ိုင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ စက်တွေဘာဒွေနဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး
ဟမ်းမိတ် မှ ဟမ်းမိတ်အစစ်
သူလုပ်တဲ့ ၀ိုင်တွေထဲမှာ ချဉ်စော်ခါးသီးဝိုင်ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ
ချဉ်စော်ခါးသီး ပေါ်ချိန်မှာ ပေါပေါသီသီ ရတဲ့ ခြံထဲကနေ
ရသမျှ ချဉ်စော်ခါးသီးကို ၀ိုင်လုပ်တယ်
အမ ကလည်း မခံဘူး … သူကျွမ်းတဲ့ ချဉ်စော်ခါးသီး ချဉ်ပေါင်းလုပ်တယ်
သူတို့နှစ်ယောက်လုပ်လို့ ပိုတဲ့ ချဉ်စော်ခါးသီးတွေကို ညီမလေး က အခြောက်လှမ်းတယ်
(အနော်ကတော့ ၀ိုင်လုပ်တဲ့ သူနား ၀ိုင်ကပ်သောက်တယ် …. ချဉ်ပေါင်းလုပ်တဲ့ သူနား ချဉ်ပေါင်းကပ်စားဒယ် ….)
မဲ့မဲ့ ၀ိုင်လုပ်ရင် အိမ်ဘေးက စဉ်းအိုးကြီးထဲ ထည့်ပြီး စဉ်းအိုးက မြေထဲ တ၀က် မြုတ်ထားတယ်
အကိုနဲ့ အနော်နဲ့က ညချိန် မီးမလာတဲ့ ရက်တွေမှာ ခိုးခိုးသောက်တတ်လို့ တကယ်သောက်ကြမယ်ဆိုရင် မချိတော့ဘူး
ချဉ်စော်ခါးသီးတွေကို အမည့်တွေ အရော်တွေက်ု ပါးပါးလှီးတယ်
ပြီးတော့ ချဉ်စော်ခါးသီး တထပ် ပြီးရင် သကြားတထပ် အဲလိုနဲ့ စဉ်းအိုးကြီး ပြည့်တဲ့အထိဖြည့်တယ်
ပြည့်ခါနီးမှာ တဆီးလို့ခေးတဲ့ yeast ကိုထည့်တယ်
New Year လို ညမျိုး နှစ်ကူုးလို နေ့မျိုးမှာ အိမ်ကိုလာလည်တဲ့ သူတွေကို တိုက်လေ့ရှိတယ်
ငွေလေး ဘာလေးရှိတဲ့ နှစ်မျိုးဆိုရင်တော့
သကြားတစ်ထပ်ပြီးရင် ပျားရည်တစ်ထပ် လောင်းထည့်တတ်တယ်
ဒီလိုပဲ တခြား အသီးတွေကိုလည်း ဒီလိုပုံမျိုးလေး လုပ်တတ်တယ်
တောင်ကြီးလို မြို့မှာ အသီးပေါရင်
အလကားကောက်ပါဆိုတာတောင် မကောက်ချင်လောက်အောင် ပေါတတ်တယ်
တခါတလေ နံနတ်သီး တလုံးမှ 50 တရာဖိုး 3လုံးလောက်ရတတ်တဲ့အပြင် ရင့်ပြီးရော်နေတဲ့ အသီး(၀ိုင်လုပ်လို့ကောင်းတဲ့အသီး) တွေကိုပါ အလကားပေးတတ်တယ်
အနော့် မမက တမျိုး
သူက ချဉ်စော်ခါးသီးကို ပါးပါးလေးလှီးတယ်
တကယ့် ပါးပါးလေးမှ ပါးပါးလေး
ပြီးရင် ဂျင်းနု ပါးပါးလေး လှီးထည့်တယ်
ပြီးတော့မှ သကြားထည့်ပြီး တညလောက် သိပ်ထားလိုက်ရင်
မနက်ဆို အရသာချိလှတဲ့ ချဉ်စော်ခါးသီးချဉ်ပေါင်းလေး စားရပြီပေါ့
မမက မုန်လာဥနီကြီးကို ပါးပါးလေးလွာပြီး သကြားရယ် သံပုရာသီးလေး ညစ်ထည့်ပြီး ကျွေးရင်
လူက လန်းပြီး မျက်စိတွေကြည်လာတယ်
တကယ့် တကယ် ၀ိုင်ဆိုတာတော့
အနော့် မဲ့မဲ့ လုပ်တဲ့ ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့
အနော် Duty Free မှာလုပ်တုန်းက
Wine tasting တွေလုပ်ရတဲ့အခါ
၀ိုင်ထုတ်ပုံ ထုတ်နည်းတွေ သင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့
အနော့် မဲ့မဲ့ရဲ့ လက်ဖြစ်ဝိုင်က ၀ိုင်လို့မခေါ်တော့ပြန်ဘူး
ဒါပေမဲ့ အနော်တို့ကတော့ ဘယ်ဝိုင်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း
အနော့် မဲ့မဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ ၀ိုင်လောက်မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ဗျ
၀ိုင်ကတော့ အများအားဖြင့် စပျစ်သီးကနေထုတ်ကြပါတယ်
၀ိုင်နီ ကိုတော့ အခွံနဲ့ ထုတ်ပြီး
၀ိုင်ဖြူ ကိုတော့ အခွံထုတ်ပြီးသား အသားနဲ့ ထုတ်ပါတယ်
~~ Red Wine
~~ White Wine
~~ Rose Wine
~~ Sparkling Wine
~~ Dessert Wine
~~Fortified Wine ဆိုပြီးခွဲထားပါသေးတယ်
၀ိုင်နီတွေကတော့ အရောင်ပါတဲ့ ၀ိုင်တွေပါ … အများအားဖြင့် အနီရောင်စပျစ်သီးတွေကနေ ထုတ်လေ့ရှိပါတယ် … ၀ိုင်ကာလာတွေကတော့ ၀ိုင်ထုတ်တဲ့ ကာလတွေမှာ ပြောင်းလဲ နေတတ်ပါတယ် ၀ိုင်နီတွေကလည်း တခုနဲ့ တခု အရသာမတူပဲ အမျိုးမျိုးသော အရသာကိုပေးလေ့ရှိပါတယ်
သူကတော့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဝိုင်ထဲမှာ ပါပါတယ် … သူကတော့ cabernet franc နဲ့ merlot ကိုပေါင်းစပ်ထားတာပါ
သူ့ကို အသားနီတွေနဲက တွဲဖတ်ပြီးသောက်လေ့ရှိပါတယ်
ဒီဝိုင်နီကတော့ cabernet sauvignon အမျိုးထဲမှာလည်းပါပါတယ် … ဒီဝိုင်ကိုတော့ Bordeaux wines အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ် ….အရသာကတော့ ချောကလက် အရသာပါ ..ဒါ့ကြောင့် ချောကလက် ကြိုက်တဲ့ သူတွေကတော့ ဒီဝိုင်မျိုးကို ကြိုက်ကြပါတယ် …. အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ နေရာတွေကတော့ California, Washington, and long island တွေဖြစ်ပါတယ်
သူကတော့ ကြက်သား၊ ကဏန်းတွေနဲ့ ဆော်လမွန်ငါးတွေနဲ့ တွဲဖတ်ပြီး သောက်လေ့ရှိပါတယ် …
Pinot noir wines မှာ အက်ဆစ်နဲ့ အချိုမပါတဲ့ ကွဲပြားတဲ့ အရသာတွေ ပါဝင်ပါတယ် သွှူအရသာကတော့ ဆီးဖြူသီးလိုလို၊ ဘရက်ဘယ်ရီလိုလို၊ ချယ်ရီလိုလို၊ ဆီးသီးလိုလို အရသာဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူ့ကိုထည့်တဲ့ ဥသျှစ်စည်ပေါ်မူတည်လို့ပါလို့ ဆရာကပြောပါတယ် …..
သူလည်း Pinot Noir လိုပဲ အချိုမဲ့တဲ့ အက်စစ် လို အရသာတွေပါပဲ …ဘရက်ဘယ်ရီလိုလို၊ ချယ်ရီလိုလို ဆီးသီးလိုလို အရသာဖြစ်ပါတယ် … တခါတလေ ကဏန်းလိုလို ၊ ချောကလက်လိုလို၊ ကော်ဖီလိုလို၊ အရသာရှိပါတယ် … အရက်ပျင်းအား များလို့ သူ့ကိုတော့ အမဲသား၊ ချိုတဲ့ အရသာရှိတဲ့ မုန်လာဥ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဂျင်း စတာတွေနဲ့ တွဲဖက်သောက်လေ့ရှိပါတယ် …
သူကတော့ အနီရင့်ရောင်ရှိတဲ့ဝိုင်ပါ… သူ့ကိုတော့ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့၊ ပီဇာ၊ ဒါမှမဟုတ် အသားနဲ့ တွဲဖတ်ပြီးသောက်လေ့ရ်ှပါတယ်….
သွှူ အနံ့ကတော့ သစ်ကြမ်းပ်ုးခေါက်လိုလို ငရုတ်ကောင်းလိုလို ဖြစ်ပါတယ်
(အချိန်ချိတော့ဘူး… မနက်ဖြန်မှ ဆက်ရေးမယ် …)
ရုံးတွင် မအားတအား အချိန်
အနော် သင်ရသလောက် ရေးထားတာဖြစ်လို့ လိုတာရှိရင် ထပ်ဖြည့်ပေးပါလို့
သိသလောက်မှတ်မိသလောက် ရှာကြံရေးထားတာမလို့ပါ ..
သောက်တော့ သောက်တယ်မလား ကိုဂီ ….
ဒီတခါ ပြန်လာရင် ဆာခူရာလေးနဲ့ လိုက်မဲ့ ၀ိုင်လေး လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ် ….
( တဆီးလို့ခေးတဲ့ yeast ကိုထည့်တယ် )
အဲ့တာ ဇဝက်သာကိုခေါ်သလား ဘယ်လိုလုပ်တယ် ဘယ်လောက်ထားရတယ်
yeast က အမျိုးမျိုးရှိတာကို
အချဉ်ဖောက်တဲ့ ပစ္စည်းကို yeast တဆေးလို့ပဲ ခေါ်ကြတာပဲ
အိမ်ပ အရဆေးဆိုင်ဆိုပေမဲ့ အနေုာ်မတိဘူး
သူ့ကို ရေနဲ့မဖျော်မချင်း ထားလို့ရပါတယ်
ဘယ်နှစ်လသိမ်းထားရမှာလဲ အမလုပ်ဖူးပေမဲ့မေ့နေလို့ ၆ လမှဖောက်ရတယ်မှတ်တယ် ဟုတ်လားနွေးတီး
အင်း… အဲဒါက အေးတဲ့ အပူချိ်န်ပေါ်မူတည်တာကြီး
ပူရင်တော့ 3လလောက်ဆို သောက်လို့ရပြီ
အမီးက မဲ့မဲ့လုပ်တုန်း ခပ်ခပ်သောက်တော့
ဘယ်အချိန် ရလဲ ဆိုတာတော့မပြောတတ်ပေမဲ့
(တခါမှတော့ 6လပြည့်အောင် မစောင့်ဘူး … သွားသွားခိုးသောက်လို့
ဖတ်ရင်း သားရည်ယို မိပါတယ်။ (အချဉ်ပေါင်းကြောင့်မှတ်တာပဲ)
တကဲ့ လက်ဖြစ်ဝိုင် သောက်ပြီး ရင် ကျန်တဲ့ ဝိုင်က ပေါ့ပါသည်။ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ ဝိုင်ဖြစ်ဖြစ်။
လွမ်းလိုက်တာ။ မသောက်ရတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလည်းမသိ။
သောက်ချင်တာအေ။ တကယ်တိုက်မှကောင်းတယ်လို့ယုံမယ်အေ။ နိုင်ငံခြားက ၀ိုင်ဖြူဝိုင်နီတွေကို ကိုယ့်နိုင်ငံက ထုပ်တဲ့ hand made ၀ိုင်လောက်တော့မကြိုက်တာအမှန်ပဲ။
ဒီတခေါက် ၀ိုင်ရရင် ပေးသောက်မယ် မသဲနုရေ
အရင်နှစ်ကတော့ တီတီတုံလေးပဲ သောက်လိုက်ရတယ်
ကိုလက်စရောများလို့.. ဘီယာမသောက်ရ..အရက်မသောက်ရဆိုလို့… ၀ိုင်နီတွေလှည့်ပါတ်သောက်နေတာ.. နှစ်ပေါက်တော့.. နည်းနည်းတော့.. မြည်းတတ်နေပြီ..။
ဆိုတော့… ယူအက်စ်.. နပတောင်ကြားဒေသမှာဝိုင်ထွက်တယ်..။
ရာသီဥတုအခြေအနေက.. ကမ္ဘာကျော်ဝိုင်တွေထွက်တဲ့.. ပြင်သစ်..အီတလီဒေသလိုပဲတဲ့..။
အဲဒီဒေသကအလကားနေရင်းကို.. သစ်ပင်ကြီးတွေမှာ. ရေညှိနွယ်တွေတက်နေတာတော့.. သတိထားမိတယ်..။
အဲဒါကို သွားလှည့်ကြည့်ပြီး.. အရသာမြည်းဖို့ကို.. တိုးရစ်ဇင်မ်ကဖွံ့ ဖြိုးနေတာ…။ အဲဒီအကြောင်းကျုပ်ရဲ့ မိုင်၁ထောင်ခရီးစဉ်မှာ တင်ဖူးတယ်မှတ်တယ်..။
Napa Wine Country Tours – Premium Napa Wineries‎
Picnic Lunch Ferry/Bay Cruise.4Wineries. $99.‎
$99 Napa Tours
$80 Sonoma Tours
Daily Napa Limo Tour $125 – napa-wine-limo-tours.com‎
Luxury Wine Tastng Tours: Boutique Wineries, Picnic Lunch and Fun!‎
View this ad’s deal – valid as of May 21, 2013
ဒီနေ့ညနေ ရေးမဲ့ထဲမှာ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ 707 တို့ Glanche တို့ပါမယ်
သူတို့ ဘာကြောင့် နာမည်ကြီးတာလဲဆိုတာရယ်
၀ိုင်အကောင်းဆုံးနှစ်ကို ဘယ်နှစ်သက်မှတ်လဲဆိုတာရေးဖို့ မနေ့က
နပမှာ.. မြန်မာတယောက် ဒေါ်လာသန်းဂဏန်းလောက်မြုတ်နှံပြီး.. ၀ိုင်လုပ်ရောင်းနေတယ်ဗျ…
မဲ့မဲ့ ရဲ့ ၀ိုင်ကို စိတ်ကူးလေးနဲ့ မြည်းကြည့်သွားပါတယ်..
နွေးသီး မဲ့မဲ့ နဲ့ မ ရဲ့ ဒါလင်နဲ့ ၀ါသနာတူ၊ ၀ိုင် ပြုလုပ်ပုံ နည်းစနစ် တူတွေဆိုတော့ မ လည်း သူ့ရဲ့ ဟန်းမိတ် ၀ိုင်ကို ဆေးဖြစ် ၀ါးဖြစ် မှီဝဲ ရပါတယ်…. မဲ့မဲ့လို စဉ့်အိုးကြီးနဲ့တော့ ၀ိုင်မဖောက်နိုင်ဘူးပေါ့ကွယ်…
ဟုတ်တယ်… သောက်ဖူးသမျှမှာတော့ ချဉ်စော်ခါးသီးဝိုင် အကြိုက်ဆုံးပဲ …..
ဒါ့ပေမဲ့ အထားတော့မခံဘူး … အိမ်ကဟာက
၀ိုင်ဖြူလေးနဲ့ ငါးကင်လေးနဲ့ ၊ ၀ိုင်နီလေးနဲ့ အသားကင်လေးနဲ့ သိပ်လိုက်.. ၀ိုင်နီကိုပိုကြိုက်တယ်.. မိန်းကလေးတွေနဲ့ လည်းတည့်တယ်ပြောလို့ ဒီလိုပဲကြိတ်မှိတ်သောက်ရင်းကြိုက်သွားတာ
ခရစ်စတယ်လေးကို ဝိုင်ဖြူနဲ့ ဝိုင်နီလေးနဲ့ မြည်းချင်တယ် ရမား…
အနော့် မဲ့မဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ ၀ိုင်စဉ့်အိုးထဲက နဲနဲခပ်သောက်သွားတယ်
yeast ဆိုတာ မုန့်လုပ်ရင် သုံးတဲ့ ပွဆေး တမျိုး မဟုတ်ဘူးလား..
အသီးတွေ အမြန်ပုတ်ရိသွားအောင် ထည့်တယ်လို့ ထင်တာပဲ
yeast က အမျိုးမျိုး ချိတယ် ဆူးရဲ့
မုန့်ဖုတ်တဲ့ နေရာမှာ ပွဆေးအဖြစ်သုံးတဲ့ yeast
၀ိုင် အရက်ဖောက်တဲ့နေရာမှ သုံးတဲ့ yeast (တဆေး)
ထမင်းရည်ဖြစ်ဖြစ် .. ဆန်ဆေးရည်ဖြစ်ဖြစ် ထည့်တယ်
အဲဒါလည်း yeast ပဲ …
အဟွတ်… မနွေးသီးရဲ့ ဝိုင်ဖောက်နည်း ပို့စ်ကိုဖတ်ရမှ အတိတ်ကိုသတိရမိရဲ့…
သူရာရည်ဝယ်မရလို့ ဂေါ်ရခါးတွေ စွန်ပလွန်သီးကဖောက်ထားတဲ့ ဝိုင်ကိုသောက်လိုက်မိတာ…
“ပန်းသလား ကျောက်စ်” ဇာတ်ကားမှာ ၂ရက်လောက် သရုပ်ဆောင်လိုက်ရတယ်…